Inkundla yokudlala yangaphakathi Iyathengiswa, Izinsiza Zokudlala - iFunlandia
IFunlandia Play Systems Inc. ingumkhiqizi owaziwayo wezindawo zokudlala zasendlini, ngaphakathi nangaphandle. Sinikeza amakhasimende ethu izixazululo eziphelele zomkhakha wokudlala wasendlini kusuka ekuhleleni, ekwakhiweni, ocwaningweni nasekuthuthukisweni, ekukhiqizweni, ekwakhiweni, ekusebenzeni nasemva kwensizakalo yokuthengisa.
IFunlandia yakha izindawo zokudlala zasendlini ngokuya ngezinga lokuphepha nekhwalithi yaseNyakatho Melika naseYurophu. Ukusuka ezintweni ezingavuthiwe kuye kuyo yonke indawo yokudlala, iFunlandia isidlulise izivivinyo ezinzima kakhulu zokuqinisekisa ukuphepha emhlabeni, njenge-ASTM, EN ne-CSA, futhi isebenzise la mazinga ngayo yonke imininingwane kusuka ocwaningweni nasekuthuthukisweni kuya ekwakhiweni, ekukhiqizweni nasekufakweni.
Siyiqembu lomhlaba wonke elihola phambili "le-fusion" design design.
Siziqhayisa nge-Children Play & Adventure, imishini yokudlala engu-300 +.
Sihlangabezana nezindinganiso zokuphepha nekhwalithi zaseNyakatho Melika naseYurophu.
Sidlulise izivivinyo eziqinile zokuqinisekisa ukuphepha njenge-ASTM ne-EN.
Sineqembu lezinsizakalo labantu abangama-200 + nabalingani emazwekazini ayisithupha.
Isikole iJunior Ninja
Isixazululo se-Turn-Key Play
Isevisi Yangemva Kokuthengisa
Khiqiza futhi ufake
Imisebenzi Yethu Yomhlaba Wonke
Iphrojekthi: BEIYOU International
Iphrojekthi: BEIYOU International Indawo: China
Iphrojekthi: L SPORTS PARK
Iphrojekthi: L SPORTS PARK Indawo: China
Iphrojekthi: 798 FLY SPORT
Iphrojekthi: 798 FLY SPORT Indawo: China
Iphrojekthi: ACTION PLANET
Iphrojekthi: ACTION PLANET Indawo: China
Iphrojekthi: Magic Loft
Iphrojekthi: Magic Loft Indawo: ENew Zealand
Iphrojekthi: Supaworld Indawo: Australia
Iphrojekthi: ICosmic Kid
Iphrojekthi: ICosmic Kid Indawo: France
Iphrojekthi: IBig Little Park
Iphrojekthi: IBig Little Park Indawo: France
Copyright 2010-2021 funlandia.com Wonke Amalungelo Agodliwe. Hot ProductsIbalazweIzinsiza kusebenza ze-Adventure Indoor Playground, IBig Air Trampoline Park Franchise, Izingane Zabakhiqizi Bendawo Yokudlala, Ukwenziwa kweTrampoline Park, Izindleko Zasendlini Yokudlala Yangaphakathi, Dlala Izinsiza Zezingane,